Abakhiqizi be-Guardrail Post & abahlinzeki - China Guardrail Post Factory
U ulolonge okuthunyelwe
C shape iposi
W ugongolo guardrail
Okuthunyelwe ikakhulukazi ukulandela i-AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 ne-EN1317 ejwayelekile. Okokusebenza kwalokhu ikakhulukazi i-Q235B (S235Jr amandla wokuvuna angaphezulu kuka-235Mpa) ne-Q345B (S355Jr amandla wokukhiqiza angaphezu kuka-345Mpa). Ngobukhulu be-guardrail ikakhulukazi nge-4.0mm kuye ku-7.0mm noma landela okufunwa ngamakhasimende. Ukwelashwa ebusweni kushisiwe kwafakwa ngosawoti, ukulandela i-AASHTO M232 kanye nezinga elilinganayo njenge-AASHTO M111, EN1461 njll. Okuthunyelwe kufakiwe ...
H shape iposi
Okuthunyelwe ikakhulukazi ukulandela i-AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 ne-EN1317 ejwayelekile. Okokusebenza kwalokhu ikakhulukazi i-Q235B (S235Jr amandla wokuvuna angaphezulu kuka-235Mpa) ne-Q345B (S355Jr amandla wokukhiqiza angaphezu kuka-345Mpa). Ngobukhulu be-guardrail ikakhulukazi nge-4.0mm kuye ku-7.0mm noma landela okufunwa ngamakhasimende. Ukwelashwa kwendawo kushisiwe kwafakwa ngosawoti, ukulandela i-AASHTO M232 kanye nezinga elilinganayo njenge-AASHTO M111, EN1461 njll. Okuthunyelwe kufakwe ngaphakathi ...